Amazon waxay soosaaraysaa shaashad taabasho cusub Echo | Wararka IPhone
Amazon waxay soosaaraysaa Echo shaashad cusub
In kasta oo aysan ku badnayn Yurub, Amazon Echo waxay u noqotay aalad aasaasi u ah malaayiin isticmaaleyaal ah oo ku nool Mareykanka. Amazon Echo waa afhayeen had iyo goor si fiican noo dhageysanaya si uu noo siiyo macluumaad aan codsanno ama ku qoro alaabada aan ugu baahanahay liiska wax iibsiga. Qalabkani wuxuu suuqa ku jiray dhowr sano oo ragga ka socda Amazon ayaa doonaya la qabsiga tikniyoolajiyada cusub adoo ku daraya shaashad taabashada aaladda, shaashadda aan ku awoodi karno inaan la falgalno adigoon adeegsan amarrada codka.
Shirkaddu waxay ku andacooneysaa inay xoogga saarayaan soo saarista qalab cusub oo la jaan qaada labada guri ee Google iyo aaladda xanta ah ee Apple la doonayo inay soo saarto iyo inay isku dayaan inay dad badan soo jiitaan. Fikradda ah in lagu daro shaashad taabasho ayaa dhiirrigelisay fududee helitaanka waxyaabaha oo kaliya ma aha habkaaga isgaarsiinta waa amarrada codka. Sidan oo kale, hubinta saadaasha hawada ama dhacdooyinka soo socda ee kalandarkayagu aad ayey ugu fududaan doonaan jaleec halkii aad dhegta ugu dhejin lahayd Echo Amazon.
Sida laga soo xigtay ilo kala duwan oo la xidhiidha horumarinta jiilkan cusub ee Amazon Echo, qaabkan cusub oo leh 7-inji shaashad taabasho ah wuxuu yeelan doonaa wax ka yar ama ka yar oo la mid ah nooca ugu qaalisan ee hadda iibka ku jira oo macquulna noqon doona waxaa maamula kaaliyaha Amazon Alexa. Amazon hadda waxay iibisaa seddex qalab oo noocaas ah: qaabka Amazon Dot waa $ 50, Amazon Tap waa $ 130 iyo Amazon Echo, oo qiimahiisu yahay $ 180. Qaabka cusub ee ay u badan tahay inuu suuqa soo galo horaanta sanadka soo socda ayaa noqon doona nooca ugu qaalisan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Amazon waxay soosaaraysaa Echo shaashad cusub
AVPlayer, waa bilaash wakhti xadidan
YouTube loogu talagalay macruufka waa la cusbooneysiiyay oo na xusuusinaya fiidiyowyada aan aragnay